Allgedo.com » Akhriso: Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta go’aan ka gaaray arimo badan oo doorashada quseeya.
Akhriso: Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta go’aan ka gaaray arimo badan oo doorashada quseeya.
Kulan ay maanta Muqdisho isugu yimaadeen Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaliya ayaa waxa ay kaga hadleen Arimo dhowr ah oo doorashooyinka quseeya.
Xildhibaanada ayaa maanta waxa ay go’aan ka gaareen Lacagaha laga qaadaayo Musharxiiinta u taagan xilka Madaxweynanimo iyo guddoonka baarlamaanka soomaliya.
Kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu dhaariyay 12 xildhibaan, iyadoo intaas kadib baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka uu maanta go’aamiyay in musharaxiinta xilka madaxweynaha laga qaadi doono lacag dhan $30,000, halka musharaxiinta guddoonka labada aqal laga rabo $15,000.